လူသိနည်းတဲ့ "လူ" တွေရဲ့ ထူးခြားအချက်အလက်တချို့ - Thutazone
လူသိနည်းတဲ့ “လူ” တွေရဲ့ ထူးခြားအချက်အလက်တချို့
By ThutammPosted on October 9, 2017 August 11, 2018
ဆောင်းပါးရှင် – ပေါက်ပေါက်
အမေရိကန်သတင်းတစ်ပုဒ်မှ ဆေးပညာအရရှုမြင်သုံးသပ်ကာ “Weird facts about human body (၀ါ) လူတွေမသိသေးတဲ့ လူ့အကြောင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စူးစမ်းပညာရှင် Brian Clegg ဆိုသူက အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထား ခဲ့ပါ တယ်။
1. ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောများအကြား အပြန်အလှန်လှုံ့ ဆော်စေခိုင်းတုန့် ပြန်မှုတို့ ရဲ့အမြန်နှုန်းဟာ ၁-နာရီလျှင် ၁၇၀ မိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. သွေးထဲမှပါလာသော အောက်စီဂျင်၏ ၂၀ % ကို ဦးနှောက်ကအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
3. လက်သည်များက ခြေသည်းတွေထက် ၄-ဆပိုအရှည်မြန်ပြီး၊ အားလုံးထဲမှာ လက်ခလယ် ရဲ့ လက်သည်းက အရှည် အမြန်ဆုံးပါဘဲ။
4. သွေးထဲရှိအငန်ပမာဏဟာ ပင်လည်ရေငန်၏ အငန်ပမာဏနှင့်ထပ်တူညီပါတယ်။
5. ကလေးတွေက ဆောင်းရာသီမှာအရပ်အရှည်မြန်ကြပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့အရပ်အမောင်း အရှည်က နံက် နှင့် ည လုံးဝမတူကြဘဲ၊ နံက်ပိုင်းမှာအရပ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါ ၁-စင်တီ မီတာပိုရှည်ပါတယ်တဲ့။
6. ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့နှလုံးသွေးကြောစီးဆင်းလည်ပတ်မှုဟာ တစ်နေ့ လျှင် အကြိမ် ၁၀၀၀ ရှိပါတယ်။
7. မျက်တောင်မွှေးရဲ့ သက်တမ်းဟာ ပျမ်းမျှ ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကြာမြင့်ပါတယ်။
8. မျက်ခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ မျက်ခုံးမွှေးအပင်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ၅၀၀စီ ရှိကြပါတယ်။
9. လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အာရုံခံဆဲလ်များမှာ ပျမ်းမျှ ၁၀၀ ဘီလီယမ် ပါရှိပါတယ်။
10. မျက်လုံးဖွင့်ပြီး၊ ဘယ်သူမှနှာချေလို့ မရနိုင်ပါ။ နှလုံးခုန်နေတာကလွဲလို့ ၊ နှာချေစဉ်မှာ ခန္ဓာ ကိုယ် တစ်ခုလုံး အလုပ်လုပ် ခြင်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။
11. အရိုးများဟာ ကွန်ကရစ်ထက် ၄-ဆမျှ ပို၍ ခိုင်ခန့် သန်မာပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အ မာ ဆုံးအရိုးဟာ မေးရိုးဖြစ်ပြီး၊ အသေးဆုံးအရိုးက နားရွက်ပါဘဲ။ အရိုးများကျိုးအက်ခြင်းက သူ့ အ လိုလို ပြန်ဆက်လေ့ရှိသော်လဲ၊ သွားအကျိုးများ ကတော့ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်မလာတော့ပါ။
12. မွေးဖွားလာချိန်မှာ ဒူးဆစ်ရှေ့ ရှိ ခုံညင်းရိုးပါပေမယ့် အသက် ၂-နှစ်မှ ၆-နှစ်ရောက်တဲ့အထိ ခုံညင်းရိုးကို သိသိသာသာ မမြင်ရနိုင်ပါ။
13. အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ နှာခေါင်း နှင့် နားတို့ ကလိုက်၍ကြီးလာသော်ငြား၊ မျက် လုံး ရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ တသမတ်တည်း အရွယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
14. မွေးဖွားလာချိန်မှာ အရိုးအဆစ်ပေါင်း ၃၀၀ရှိကြပေမယ့်၊ အရွယ်ရောက်တာတဲ့အချိန်မှာတော့ ၂၀၆ မျှသာရှိပါတော့တယ်။
15. ဦးခေါင်းခွံကို မတူညီသော အရိုးပေါင်း ၂၆ ခုဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားပါတယ်။
16. ဆံပင်ကိုဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အရာဝတ္တုပစ္စည်းများဟာ လက်သည်းခွံမှာပါတဲ့အရာဝတ္တုများနှင့် တူတူ ပါဘဲ။
17. လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးကြွက်သားက တင်ပါးဖြစ်ပြီး၊ အသန်မာဆုံးကြွက်သားက လျှာ ဖြစ်ပါတယ်။
18. တစ်နေ့့တာသောက်သုံးလိုက်သောရေ၏ ၁.၅ လီတာပမာဏကို ဆီးအဖြစ် စွန့် ထုတ်လေ့ရှိပြီး၊ ပျမ်းမျှလူတစ်ယောက် က တနေ့ လျှင် အနည်းဆုံး ရှုး(အပေါ့) ၆ ခါ စွန့် ထု တ်လေ့ ရှိပါတယ်။
19. ခံတွင်းထဲကမျိုချလိုက်တဲ့ အစာက အစာအိမ်ကိုရောက်ဖို့၇-စက္ကန့် ကြာပါတယ်တဲ့။
20. ကလေးများက လူကြီးများထက် အရသာခံအာရုံ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
21. နှာခေါင်းထဲမှ နှပ်ချေးညှစ်ထုတ်တဲ့ ပြင်းအားက တနာရီလျှင် မိုင်၁၀၀ နှုန်းနဲ့ ညီမျှပါတယ်။
22. ဆံပင်တစ်ပင်၏ သက်တမ်းဟာ ၃-နှစ်မှ ၇-နှစ်အထိ ရှိတတ်ပြီး၊ ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ အမျိုးသားများက တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ဆံပင် ၄၀ ကျွတ်ကြပြီး၊ အမျိုးသမီးများ အပင် ၇၀ ကျွတ်ကြ ပါတယ်။
23. ဘလိပ်ဓားဟာ အစာအိမ်ထဲက အစာချေအက်ဆစ်ရည်ထဲမှာ ပျော်ဝင်နိုင်ပါတယ်။
24. အမျိုးသမီးများရဲ့ နှလုံးခန်နှုံးဟာ အမျိုးသားများထက် ပိုမြန်ပါတယ်။
25. ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလီစာတွေမှာ အသည်းက အလုပ်အရှုပ်ဆုံးပါတဲ့။
26. အဆုပ်ထဲမှာ ဆံချည်ပြွန်သွေးကြောမျှင် သန်း ၃၀၀ ပါရှိပြီး၊ ဘယ်ဘက်အဆုပ်က ညာဘက် အဆုပ် ထက်ပိုသေးပါတယ်။
27. လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်မိနစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၁၃-ကြိမ်မျှ မျက်တောင်ခတ်လေ့ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးက ၂-ဆပိုပါတယ်တဲ့။
28. ခြေဖ၀ါးမှာ ချွေးဂလင်းပေါင်း ၅-သိန်းမျှပါရှိပါတယ်။
29. တံတွေးဟာ ခံတွင်းရဲ့ စက်ဆီ/ချောဆီကဲ့သို့ခံတွင်းကိုစိုစွတ်စေကာ၊ အစာများအလွယ်တကူ ၀ါးခြေမျိုချနိုင်အောင် ကူ ညီပေးပါတယ်။ လူ့ ဘ၀တစ်သက်တာအတွင်း တံတွေးထွက်ရှိမှု ဟာ ရေကူးကန် ၂-ကန်စာနှင့် ညီမျှပါတယ်။
30. ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရဲ့အကြီးဆုံးဆဲလ်က မမျိုးဥ ဖြစ်ပြီး၊ အသေးဆုံးဆဲလ်က ဖိုသုက်ရည်ထဲရှိ လိင်ကလပ်စည်းဖြစ်ပါတယ်။
31. မိခင်ဝမ်းတွင်းသန္ဓေသားဘ၀ မမွေးဖွားခင် ၆-လအလိုမှာကတည်းက သွားပေါက်ဖို့အရှိန် ယူနေပါပြီတဲ့။
32. အမျိုးသား ၁၀ ဦးမှာ ၉ ဦးခန့် က အချိန်နာရီတိုင်းမှာ ရာဂစိတ်နိုးကြွလေ့ရှိပြီး၊ ၁၀-ဦးမှာ ၅-ဦး က အိပ်နေစဉ်မှာတောင် ရာဂစိတ်နိုးကြွပါတယ်။
33. စားပိုးနင့်နေအောင်စားခြင်းက အကြားအာရုံကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
34. လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနံ့ ခံအာရုံက မတူညီသော အနံ့၅-သောင်းခန့် ကို ခွဲခြားမှတ်မိနေ တတ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အနံ့ ခံစွမ်းအားပိုအားကောင်းပါတယ်။ အသက် ၆၀ ကျော်ရင်တော့ ကျား-မ အားလုံး အနံ့ ခံအာရုံ လျော့ကျလေ့ရှိပါတယ်။
35. အသက် ၆၀ ရာက်လာတဲ့အခါ အမျိုးသားများ၏ ၆၀% က အိပ်ပျော်စဉ်ဟောက်လေ့ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာတော့ ၄၀% ဟောက်လေ့ရှိပါတယ်။
36. ခလေးငယ်၏ ဦးခေါင်းအရွယ်အစားဟာ သူ့ အရပ်ရဲ့၎ပုံ၁ပုံမျှ ရှိပြီး၊ အသက် ၂၅-နှစ်မှာေ တာ့ ဦးခေါင်းအရွယ်က အရပ် အရှည်ရဲ့၈ပုံ၁ပုံဖြစ်သွားပါတယ်။
37. ရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်ရခြင်း၏ ၉၀% ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရ ပါ တယ်။
38. အရေပြားအပေါ်ယံဆဲလ်များက ၂၇-ရက် တစ်ကြိမ် ကြွေကျအသစ်လဲလေ့ရှိပြီး၊ တကိုယ်လုံး ရဲ့ အရေပြားပေါ်သို့နေ့ စဉ် ဗက်တီးရီယားပိုးမွှားပေါင်း ၃၂သန်း အလည်လာလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
39. အရွယ်ရောက်သူများအားလုံး မိနစ်တိုင်းမှာ ကိုယ်တွင်းရှိဆဲလ်ပေါင်း သန်း ၃၀၀ မျှ သြေ ကပြီး၊ တစ်နေ့ လျှင် ဆဲလ်သစ် ပေါင်း ၃၀၀ ဘီလီလျှံမွေးဖွားလာလေ့ရှိပါတယ်။40. နှုတ်ခမ်းများ အနီရောင်သန်းနေရခြင်းမှာ နှုတ်ခမ်းအရေပြားအောက်မှာ အလွန်သေးငယ်ေ သာ သွေးကြောမျှင်များစုဝေး နေခြင်းကြောင့်ပါဘဲ။
41. နွေးနွေးထွေးထွေးအိပ်စက်ခြင်းက အိပ်မက်ဆိုးတွေ မမက်စေပါဘူး။
42. လက် ၂-ဘက်ဆန့် တန်းတဲ့ အကျယ်အ၀န်းက အရပ်အမောင်းအရှည်နှင်ထပ်တူညီပါတယ်။
43. အမျိုးသမီးများ၏ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုက အမျိုးသားများထက်နှေးကွေးကြလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုစုဝေးနေကြပါတယ်။
44. သွေးနီဥဆဲလ် တခုဟာ ခန္ဓာကိုယ် ၁-ပတ်ပြည့်ဝစွာ လည်ပတ်ဖို့ ၆၀စက္ကန့် မျှ အချိန်ကြာပါ တယ်တဲ့။
45. ကျမ္မာသန်းစွမ်းသော အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ တနေ့ လျှင် သုက်ကောင်ရေ ၁၀ သန်းမျှ ထွက်ရှိပါတယ်။
46. IQ မြင့်သူတွေက အိပ်ပျော်နေစဉ် မကြာခဏ အိပ်မက် မြင်မက်လေ့ရှိကြပါတယ်။
လူသိနညျးတဲ့ “လူ” တှရေဲ့ ထူးခွားအခကျြအလကျတခြို့ (unicode)
ဆောငျးပါးရှငျ – ပေါကျပေါကျ
အမရေိကနျသတငျးတဈပုဒျမှ ဆေးပညာအရရှုမွငျသုံးသပျကာ “Weird facts about human body (ဝါ) လူတှမေသိသေးတဲ့ လူ့ အကွောငျး” ခေါငျးစဉျဖွငျ့ စူးစမျးပညာရှငျ Brian Clegg ဆိုသူက အောကျပါ အတိုငျး ဖျောပွထား ခဲ့ပါ တယျ။
1. ဦးနှောကျ နှငျ့ အာရုံကွောမြားအကွား အပွနျအလှနျလှုံ့ဆျောစခေိုငျးတုနျ့ပွနျမှုတို့ရဲ့ အမွနျနှုနျးဟာ ၁-နာရီလြှငျ ၁၇၀ မိုငျနှုနျး ဖွဈပါတယျ။
2. သှေးထဲမှပါလာသော အောကျစီဂငျြ၏ ၂၀ % ကို ဦးနှောကျကအသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။
3. လကျသညျမြားက ခွသေညျးတှထေကျ ၄-ဆပိုအရှညျမွနျပွီး၊ အားလုံးထဲမှာ လကျခလယျ ရဲ့လကျသညျးက အရှညျ အမွနျဆုံးပါဘဲ။
4. သှေးထဲရှိအငနျပမာဏဟာ ပငျလညျရငေနျ၏ အငနျပမာဏနှငျ့ထပျတူညီပါတယျ။
5. ကလေးတှကေ ဆောငျးရာသီမှာအရပျအရှညျမွနျကွပါတယျ။ လူတယောကျရဲ့ အရပျအမောငျး အရှညျက နံကျ နှငျ့ ည လုံးဝမတူကွဘဲ၊ နံကျပိုငျးမှာအရပျတိုငျးကွညျ့တဲ့အခါ ၁-စငျတီ မီတာပိုရှညျပါတယျတဲ့။
6. ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးသို့ နှလုံးသှေးကွောစီးဆငျးလညျပတျမှုဟာ တဈနလြေှ့ငျ အကွိမျ ၁၀၀၀ ရှိပါတယျ။
7. မကျြတောငျမှေးရဲ့သကျတမျးဟာ ပမျြးမြှ ရကျပေါငျး ၁၅၀ ကွာမွငျ့ပါတယျ။
8. မကျြခုံးတဈဖကျတဈခကျြစီမှာ မကျြခုံးမှေးအပငျပေါငျး ပမျြးမြှ ၅၀ဝစီ ရှိကွပါတယျ။
9. လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲရှိ အာရုံခံဆဲလျမြားမှာ ပမျြးမြှ ၁၀၀ ဘီလီယမျ ပါရှိပါတယျ။
10. မကျြလုံးဖှငျ့ပွီး၊ ဘယျသူမှနှာခလြေို့မရနိုငျပါ။ နှလုံးခုနျနတောကလှဲလို့၊ နှာခစြေဉျမှာ ခန်ဓာ ကျိုယျ တဈခုလုံး အလုပျလုပျ ခွငျး ခတ်ေတရပျဆိုငျးသှားလရှေိ့ပါတယျ။
11. အရိုးမြားဟာ ကှနျကရဈထကျ ၄-ဆမြှ ပို၍ ခိုငျခနျ့သနျမာပါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့အ မာ ဆုံးအရိုးဟာ မေးရိုးဖွဈပွီး၊ အသေးဆုံးအရိုးက နားရှကျပါဘဲ။ အရိုးမြားကြိုးအကျခွငျးက သူ့အ လိုလို ပွနျဆကျလရှေိ့သျောလဲ၊ သှားအကြိုးမြား ကတော့ နဂိုအတိုငျးပွနျဖွဈမလာတော့ပါ။
12. မှေးဖှားလာခြိနျမှာ ဒူးဆဈရှရှေိ့ ခုံညငျးရိုးပါပမေယျ့ အသကျ ၂-နှဈမှ ၆-နှဈရောကျတဲ့အထိ ခုံညငျးရိုးကို သိသိသာသာ မမွငျရနိုငျပါ။
13. အသကျအရှယျကွီးလာတာနဲ့အမြှ နှာခေါငျး နှငျ့ နားတို့ကလိုကျ၍ကွီးလာသျောငွား၊ မကျြ လုံး ရဲ့အရှယျအစားကတော့ တသမတျတညျး အရှယျပွောငျးလဲမှုမရှိပါ။
14. မှေးဖှားလာခြိနျမှာ အရိုးအဆဈပေါငျး ၃၀ဝရှိကွပမေယျ့၊ အရှယျရောကျတာတဲ့အခြိနျမှာတော့ ၂၀၆ မြှသာရှိပါတော့တယျ။
15. ဦးခေါငျးခှံကို မတူညီသော အရိုးပေါငျး ၂၆ ခုဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။
16. ဆံပငျကိုဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အရာဝတ်တုပစ်စညျးမြားဟာ လကျသညျးခှံမှာပါတဲ့ အရာဝတ်တုမြားနှငျ့ တူတူ ပါဘဲ။
17. လူ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့အကွီးမားဆုံးကွှကျသားက တငျပါးဖွဈပွီး၊ အသနျမာဆုံးကွှကျသားက လြှာ ဖွဈပါတယျ။
18. တဈနတေ့ာသောကျသုံးလိုကျသောရေ၏ ၁.၅ လီတာပမာဏကို ဆီးအဖွဈ စှနျ့ထုတျလရှေိ့ပွီး၊ ပမျြးမြှလူတဈယောကျ က တနလြေှ့ငျ အနညျးဆုံး ရှုး(အပေါ့) ၆ ခါ စှနျ့ထု တျလေ့ ရှိပါတယျ။
19. ခံတှငျးထဲကမြိုခလျြိုကျတဲ့ အစာက အစာအိမျကိုရောကျဖို့ ၇-စက်ကနျ့ကွာပါတယျတဲ့။
20. ကလေးမြားက လူကွီးမြားထကျ အရသာခံအာရုံ ပိုမိုကောငျးမှနျပါတယျ။
21. နှာခေါငျးထဲမှ နှပျခြေးညှဈထုတျတဲ့ ပွငျးအားက တနာရီလြှငျ မျိုငျ၁၀၀ နှုနျးနဲ့ညီမြှပါတယျ။
22. ဆံပငျတဈပငျ၏ သကျတမျးဟာ ၃-နှဈမှ ၇-နှဈအထိ ရှိတတျပွီး၊ ရာသီဥတုပျေါမူတညျ၍ အမြိုးသားမြားက တဈနေ့ လြှငျပမျြးမြှ ဆံပငျ ၄၀ ကြှတျကွပွီး၊ အမြိုးသမီးမြား အပငျ ၇၀ ကြှတျကွ ပါတယျ။
23. ဘလိပျဓားဟာ အစာအိမျထဲက အစာခအြေကျဆဈရညျထဲမှာ ပြျောဝငျနိုငျပါတယျ။
24. အမြိုးသမီးမြားရဲ့နှလုံးခနျနှုံးဟာ အမြိုးသားမြားထကျ ပိုမွနျပါတယျ။
25. ခန်ဓာကိုယျအတှငျးကလီစာတှမှော အသညျးက အလုပျအရှုပျဆုံးပါတဲ့။
26. အဆုပျထဲမှာ ဆံခညျြပွှနျသှေးကွောမြှငျ သနျး ၃၀၀ ပါရှိပွီး၊ ဘယျဘကျအဆုပျက ညာဘကျ အဆုပျ ထကျပိုသေးပါတယျ။
27. လူတဈယောကျဟာ တဈမိနဈလြှငျ ပမျြးမြှ ၁၃-ကွိမျမြှ မကျြတောငျခတျလရှေိ့ပွီး၊ အမြိုးသမီးက ၂-ဆပိုပါတယျတဲ့။
28. ခွဖေဝါးမှာ ခြှေးဂလငျးပေါငျး ၅-သိနျးမြှပါရှိပါတယျ။
29. တံတှေးဟာ ခံတှငျးရဲ့စကျဆီ/ခြောဆီကဲ့သို့ ခံတှငျးကိုစိုစှတျစကော၊ အစာမြားအလှယျတကူ ဝါးခွမြေိုခနြိုငျအောငျ ကူ ညီပေးပါတယျ။ လူ့ဘဝတဈသကျတာအတှငျး တံတှေးထှကျရှိမှု ဟာ ရကေူးကနျ ၂-ကနျစာနှငျ့ ညီမြှပါတယျ။
30. ခန်ဓာကိုယျတဈခုရဲ့ အကွီးဆုံးဆဲလျက မမြိုးဥ ဖွဈပွီး၊ အသေးဆုံးဆဲလျက ဖိုသုကျရညျထဲရှိ လိငျကလပျစညျးဖွဈပါတယျ။
31. မိခငျဝမျးတှငျးသန်ဓသေားဘ၀ မမှေးဖှားခငျ ၆-လအလိုမှာကတညျးက သှားပေါကျဖို့ အရှိနျ ယူနပေါပွီတဲ့။
32. အမြိုးသား ၁၀ ဦးမှာ ၉ ဦးခနျ့က အခြိနျနာရီတိုငျးမှာ ရာဂစိတျနိုးကွှလရှေိ့ပွီး၊ ၁၀-ဦးမှာ ၅-ဦး က အိပျနစေဉျမှာတောငျ ရာဂစိတျနိုးကွှပါတယျ။
33. စားပိုးနငျ့နအေောငျစားခွငျးက အကွားအာရုံကိုလြော့နညျးစပေါတယျ။
34. လူတဈယောကျရဲ့အနံ့ခံအာရုံက မတူညီသော အနံ့ ၅-သောငျးခနျ့ကို ခှဲခွားမှတျမိနေ တတျပွီး၊ အမြိုးသမီးမြားက အမြိုးသားမြားထကျ အနံ့ခံစှမျးအားပိုအားကောငျးပါတယျ။ အသကျ ၆၀ ကြျောရငျတော့ ကြား-မ အားလုံး အနံ့ခံအာရုံ လြော့ကလြရှေိ့ပါတယျ။
35. အသကျ ၆၀ ရာကျလာတဲ့အခါ အမြိုးသားမြား၏ ၆၀% က အိပျပြျောစဉျဟောကျလရှေိ့ပွီး၊ အမြိုးသမီးမြားမှာတော့ ၄၀% ဟောကျလရှေိ့ပါတယျ။
36. ခလေးငယျ၏ ဦးခေါငျးအရှယျအစားဟာ သူ့အရပျရဲ့ ၄ပုံ၁ပုံမြှ ရှိပွီး၊ အသကျ ၂၅-နှဈမှာေ တာ့ ဦးခေါငျးအရှယျက အရပျ အရှညျရဲ့ ၈ပုံ၁ပုံဖွဈသှားပါတယျ။
37. ရောဂါဝဒေနာစှဲကပျရခွငျး၏ ၉၀% ဟာ စိတျဓာတျကဆြငျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာရ ပါ တယျ။
38. အရပွေားအပျေါယံဆဲလျမြားက ၂၇-ရကျ တဈကွိမျ ကွှကေအြသဈလဲလရှေိ့ပွီး၊ တကိုယျလုံး ရဲ့အရပွေားပျေါသို့ နစေ့ဉျ ဗကျတီးရီယားပိုးမှားပေါငျး ၃၂သနျး အလညျလာလရှေိ့ပါတယျတဲ့။
39. အရှယျရောကျသူမြားအားလုံး မိနဈတိုငျးမှာ ကိုယျတှငျးရှိဆဲလျပေါငျး သနျး ၃၀၀ မြှ သြေ ကပွီး၊ တဈနလြေှ့ငျ ဆဲလျသဈ ပေါငျး ၃၀၀ ဘီလီလြှံမှေးဖှားလာလရှေိ့ပါတယျ။
40. နှုတျခမျးမြား အနီရောငျသနျးနရေခွငျးမှာ နှုတျခမျးအရပွေားအောကျမှာ အလှနျသေးငယျေ သာ သှေးကွောမြှငျမြားစုဝေး နခွေငျးကွောငျ့ပါဘဲ။
41. နှေးနှေးထှေးထှေးအိပျစကျခွငျးက အိပျမကျဆိုးတှေ မမကျစပေါဘူး။
42. လကျ ၂-ဘကျဆနျ့တနျးတဲ့ အကယျြအဝနျးက အရပျအမောငျးအရှညျနှင်ထပျတူညီပါတယျ။
43. အမြိုးသမီးမြား၏ အဆီလောငျကြှမျးမှုက အမြိုးသားမြားထကျနှေးကှေးကွလို့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီပိုစုဝေးနကွေပါတယျ။
44. သှေးနီဥဆဲလျ တခုဟာ ခန်ဓာကိုယျ ၁-ပတျပွညျ့ဝစှာ လညျပတျဖို့၆ဝစက်ကနျ့မြှ အခြိနျကွာပါ တယျတဲ့။
45. ကမ်ြမာသနျးစှမျးသော အမြိုးသားတဈယောကျဟာ တနလြေှ့ငျ သုကျကောငျရေ ၁၀ သနျးမြှ ထှကျရှိပါတယျ။
46. IQ မွငျ့သူတှကေ အိပျပြျောနစေဉျ မကွာခဏ အိပျမကျ မွငျမကျလရှေိ့ကွပါတယျ။
Posted in Amazing, KnowledgeTagged amazing, facts, knowledge
Previous post ညီအစ်အကို နှစ်ယောက်ရဲ့ ခြားနားချက်
Next post အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းအခြေအနေကွာခြားချက်အချို့